DJ သမားဗီဒီယို Drop THREE
Home / Specials Products / DJ Video Drop THREE
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး DJ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား "Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ 2013" နောက်မှလုပ်ပါတယ်ကျနော်တို့ဒီကသင်၏လက်နက်တိုက်ဘို့ DJ ကိုဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ခြင်းကိုရှိရမည်ရာ၌ခန့်ထားပြီ! သင့်အမည်နှင့်ကလပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီလိုဂိုမပါအပိုဆောင်းတာဝန်ခံမှာဒီစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုကိုထည့်သွင်းထားသည်။
"MESDAMES ET MESSIEURS, puis-je avoir votre အာရုံကို S'IL vous ပုတီး! SIGNORE အီး SIGNORI, posso avere la vostra attenzione နှုန်းမျက်နှာသာ! Ladies and Gentlemen ငါသင်၏အာရုံစိုက်မှုပါရမလား ဘယျအရာမျက်မြင်သက်သေပါတော့မည်အစစ်အမှန် IS ။ WHAT ကိုခံစားရတော့မည်အိပ်မက် IS ။ 'သွားပြန်ပြီ!' (ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်) မှ DJ (သင့်အမည်) (Club သို့မဟုတ် COMPANY - CITY / Town) ... ခွေးမ "! (optional)
SKU: DjVidDrops3 အမျိုးအစား: Specials Products
SCRIPT: "MESDAMES ET MESSIEURS, puis-je avoir votre အာရုံကို S'IL vous ပုတီး! SIGNORE အီး SIGNORI, posso avere la vostra attenzione နှုန်းမျက်နှာသာ! Ladies and Gentlemen ငါသင်၏အာရုံစိုက်မှုပါရမလား ဘယျအရာမျက်မြင်သက်သေပါတော့မည်အစစ်အမှန် IS ။ WHAT ကိုခံစားရတော့မည်အိပ်မက် IS ။ 'သွားပြန်ပြီ!' (ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်) မှ DJ (သင့်အမည်) (Club သို့မဟုတ် COMPANY - CITY / Town) ... ခွေးမ "(optional)!
(60 စက္ကန့်အထိ) ကျဘျ / လူမှုမီဒီယာဗွီဒီယိုအထူးနှုန်းများ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ: + 1 (212) 651-1522
All Rights Reserved © 2018 - 2019 NyeCountdown.com, llc All products & services are provided without copyrighted music. We provide only the customized voiced parts & templates for the professional DJ to mix in their own licensed music. All content with music including, but not limited to, countdowns; on this website are for promotional and demonstration purposes only. ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ